Indlu eyakhiwe ngamapulangwe #2 - I-The Imper Pad - I-Airbnb
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe #2 - I-The Imper Pad
Sechelt, British Columbia, i-Canada
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Gary And Jen
U-Gary And Jen Ungumbungazi ovelele
Le ndlu eyakhiwe ngamapulangwe engenakuphikiswa ikhonyiwe phakathi kwezihlahla futhi inombono othile we-Sechelt Inlet. Ibhishi liwukuhambahamba kwemizuzu emibili, futhi umphakathi wethu uthule kakhulu njengoba uhlezi ekupheleni komgwaqo. Kungani ungafiki futhi uphumule izinsuku ezimbalwa?
Indlu yethu eyakhiwe ngamapulangwe inombono omuhle we-Sechelt Inlet. Futhi konke kungokwakho ukuthi ukujabulele. Inesakhiwo esivuleke kakhulu ngaphakathi. Inamakamelo amabili okulala, futhi inokubukwa kolwandle, ikhishi eligcwele, kanye ne-balcony enkulu, yangasese ngaphambili.
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe iseduze kakhulu nesiphephelo somgwaqo ohlala kuwo, ngakho akukho okuncane kokuphazamisa isikhathi sakho sokuphumula. Qaphela, ungaba nokulala okungcono kakhulu ekuphileni kwakho lapha.
Kukhona ama-oodles okuqwala izintaba namabhayisikili asezintabeni aseduze (i-Gravity Park isemgwaqweni nje kuphela) kanye nemicimbi eminingi nemikhosi okufanele ithokozelwe, ikakhulukazi phakathi nezinyanga zasehlobo. Indlu yethu eyakhiwe ngamapulangwe iyindawo ekahle kakhulu kunoma ubani onesifiso sokubona okungcono kakhulu kwe-British Columbia.
Abantu abane bangakwazi ukuhlala ngokunethezeka, kodwa futhi kukhona usofa ovulekayo egumbini lokuphumula uma ufuna ukusabalalisa okwengeziwe ngokulala.
4.93 out of 5 stars from 351 reviews
4.93 · 351 okushiwo abanye
Izindlu zethu ezakhiwe ngamapulangwe zise-Tuwanek eseduze kakhulu nomgwaqo ogijima enyakatho ngasempumalanga ye-Sechelt Inlet. Ngaphandle kwe-Tuwanek kukhona enye indawo ngaphandle kwehlane, etholakala kuphela ngendiza noma ngesikebhe. Ngenxa yalokho, kuthule kakhulu lapha ngaphandle kwethrafikhi.
Ngezansi kwethu kukhona i-Tuwanek spit, evame ukuduma nabantu abahlukahlukene. Kukhona ibhishi lesibili eliqhele ngebanga elifushane elilungele izingane futhi kulula ukubhukuda. Futhi iyindawo enhle yokugwedla ngesikebhe ne-canoeing, futhi kuye ngesikhathi sonyaka, ungaziqasha ku-Peddles ne-Paddles, eseduze kakhulu.
Ngemuva kwethu umgwaqo wokungena ngemvume yi-Mount Richardson ne-Tetrahedron Regional Parks, enemizila eminingi ngisho nochungechunge lwezindlu ezakhiwe ngamapulangwe ezingahlalwa e- ngohlobo oluthandekayo. Kuyeluleka ukuba ube nemoto emangelengele ukuze ufike lapho, futhi nakanjani amaketanga uma uzama ebusika.
Cishe ngemizuzu emihlanu uma uhamba ngemoto ukuya edolobheni i-Fihliwe Grove enesethi yemizila ethandekayo kakhulu, futhi etholakala kalula engatholwa yibo bonke. Futhi eminye imizuzu embalwa ukuya edolobheni uzothola i-Porpoise Bay Regional Park enebhishi elihle, elinesihlabathi futhi kumnandi ukulivakashela phakathi nezinyanga zasehlobo.
Kukhona okuningi kakhulu ongakubona futhi ukwenze kude kakhulu nogu. Okuvelele okumbalwa kuhlanganisa ukuhambahamba okumnandi cishe imizuzu engu- ukusuka lapha e-Smugglers Cove, ukuhamba ngezinyawo/ukutshuza eqhweni phezulu e-Dakota Ridge, ukushayela okumnandi nge-Madeira Park noma i-Garden Bay, kanye nokuzilibazisa kuze kube sekupheleni kwe-peninsula ukubona amagagasi amile e-Skookumchuck Narrows!
Ibungazwe ngu-Gary And Jen
Sivame ukushiyela izivakashi kumadivayisi azo. Sihlala endlini eyakhiwe ngamapulangwe iminyango emibili ngakwesobunxele, futhi simema izivakashi ukuthi zingqongqoze emnyango wethu, ucingo, noma zithumele umlayezo noma nini ngemibuzo, imibono, ukukhathazeka noma ukusikisela!
Sivame ukushiyela izivakashi kumadivayisi azo. Sihlala endlini eyakhiwe ngamapulangwe iminyango emibili ngakwesobunxele, futhi simema izivakashi ukuthi zingqongqoze emnyango wethu,…
UGary And Jen Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Sechelt namaphethelo